Unqenqema lwe-Samsung Galalaxy S6 + manje selusemthethweni | Izindaba zamagajethi
Kwaphela izinsuku sazi ukuthi namuhla okusha Inqamuleli ye-Samsung Galaxy S6 +, inguqulo ethuthukisiwe nenkudlwana yomngcele ophumelelayo we-Galaxy S6 futhi yize besivele sazi cishe yonke imininingwane yalesi siginali esisha, ikwazile ukusimangaza ngendlela emnandi kakhulu.
Futhi kungenxa yokuthi lesi siginali sibukeka kakhulu njengaleso i-Samsung esivele isethule kwi-MWC ebibanjelwe eBarcelona, ​​isikrini nemiphetho yaso egobile iyaqhubeka ukusimangaza, okuyindlela ethile inketho ethokozisayo eye yaba ngayo ungeze ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sizobuyekeza. Kulabo abaphuthumile, abafuni ukufunda yonke i-athikili futhi badinga okhiye balesi siginali esisha, kufanele bazi ukuthi sibhekene nomphetho we-Galaxy S6 onovithamini, njengoba negama lawo selivele likhombisa.
Okulandelayo, sizofunda ngezimpawu eziyinhloko nokucaciswa kwale divayisi entsha yeselula, nangemva kokuqala ukubuyekeza nayo yonke idatha esesandleni.
1 Izici ze-Galaxy S6 Edge + nokucaciswa
2 Izindaba; usayizi, ibhethri ne-RAM
3 Izici ezintsha zemiphetho egobile
4 Izinto eziphuthelwe yi-Samsung
5 Intengo nokutholakala
Izici kanye nemininingwane ye-Galaxy S6 Edge +
Ubukhulu: 154,4 x 75,8 x 6.9 mm
Isisindo: 153 amagremu
IsikriniIphaneli engu-5.7 intshi ye-QuadHD SuperAMOLED. Ukulungiswa kwamaphikseli angama-2560 x 1440.Ubukhulu: 518 ppi
Umseshi: Exynos 7 octacore. Amane ku-2.1 GHz futhi amanye amane ku-1.56 Ghz.
Ikhamera enkulu: Inzwa ye-16 MP ene-optical image stabilizer ne-f / 1.9 ukuvula
Ikhamera yangaphambili: Inzwa ye-5 megapixel ene-f / 1.9 ukuvula
Imemori ye-RAM: 4GB LPDDR4
Imemori yangaphakathi: 32 noma 64 GB
Ibhetri: 3.000 mAh. Ukushaja okungenantambo (WPC ne-PMA) nokushaja okusheshayo
Ukuxhumana: I-LTE Cat 9, i-LTE Cat 6 (iyahlukahluka ngesifunda), i-WiFi
Isistimu yokusebenza: I-Android 5.1
abanye: I-NFC, inzwa yezigxivizo zeminwe, isilawuli sokushaya kwenhliziyo
Izindaba; usayizi, ibhethri ne-RAM
Yize iningi lethu belilindele ukuthi le nqenqemeni ye-Galaxy S6 + izosinikeza izindaba ezinhle uma kuqhathaniswa nomfowabo omncane, onqenqemeni lwe-Galaxy S6, lokhu bekungenzeki futhi sibona ushintsho kuphela ezicini ezintathu; usayizi, ibhethri ne-RAM.
Ukuqala ngosayizi esikutholayo Le onqenqemeni lwe-Galaxy S6 + lukhule kusuka kuma-intshi angu-5.1 kuya kuma-intshi angu-5.7 wesikrini, ize ifinyelele ekuphakameni kwamatheminali omndeni wakwaNote. Isixazululo, ngakolunye uhlangothi, asikashintshi, ngoba kusengamaphikseli angama-2560x 1440, nokho okwenza ukuthi ubukhulu bamaphikseli nge-intshi yehlele ku-518, kusuka ku-577 enikezwa yisikrini sokuqala se-S6.
Kulesi senzakalo Imemori ye-RAM inyukela ku-4 GB ukugcwalisa ngokuphelele iprosesa ye-Exynos 7, eyenziwe yi-Samsung uqobo. Ekugcineni, ibhethri lalo likhula lifike ku-3.000 mAh, okuzosho elinye ihora lokuzimela, into ebingadingeki kakhulu futhi nabasebenzisi abaningi bebeyifuna kakhulu.
Ibhethri likhule ikakhulukazi ngoba bekudingeka ukuthi kufakwe isikrini esikhudlwana, nangenxa yokuthi isikhala ngaphakathi kwefoni sikhulu njengoba sikhule ngosayizi.
Izici ezintsha zemiphetho egobile
Lapho sibukeza onqenqemeni be-S6 besivele sisho ukuthi ngaphandle kobuhle bemiphetho egobile yesikrini, bebenosizo oluncane kakhulu. AbakwaSamsung kubonakala sengathi bacabange into efanayo noma mhlawumbe banqume ukulalela abasebenzisi bayo futhi kulo mkhawulo we-S6 + ukusebenza kwemiphetho egobile kukhulu.
Okokuqala, uhlelo lokuxhumana lubhapathizwe ngegama le- Ukufinyelela okusheshayo futhi isikhathi ngasinye lapho oxhumana nabo abakhethiwe isikrini sizokhanya ngombala okhethiwe.
I- kungenzeka ukubheka ngokushesha izinhlelo zokusebenza zakamuva ezisetshenzisiwe, kanye nezinye izinketho okufanele sizazi futhi sizame ngokuthula.
Izinto eziphuthelwe yi-Samsung
Le onqenqemeni lwe-Samsung Galaxy S6 + singasho ukuthi ilandela umugqa oqale ngomfowabo omncane lapho ibhethri ibingasasuswa khona noma ikhadi le-MicroSD lisuliwe ebalazweni. Lezi zinto ezimbili zihlala zingashintshiwe futhi ngeke sikwazi ukususa ibhethri esigungwini noma sandise isikhala sokugcina sesiginali. Bekuyizinto ezimbili iningi lethu elifisa ukuthi zizoshintsha kodwa ngeshwa konke kuhlala kusenjalo.
Okokugcina, kufanele sisho ukuthi ikhamera isafana ncamashi nonqenqema lwe-Galaxy S6, okungabamangaza abaningi, kepha ikhamera ingesinye sezici lapho i-Galaxy S6 isivele inendawo encane kakhulu yokwenza ngcono.
Njengoba kuqinisekiswe ngabakwaSamsung Lo mkhawulo omusha we-Galaxy S6 + uzotholakala emakethe yaseSpain nokunye okuningi ngenyanga kaSepthemba, yize okwamanje kunganikezwanga usuku oluqondile lokutholakala. Asazi futhi nentengo yalesi siginali, ezoncika kwisitoreji sangaphakathi esifuna ukusithola.
Ngokushesha nje lapho sesazi zombili inani lentengo yomphetho omusha we-Galaxy S6 + nosuku lokuqalisa kwayo sizokwazisa.
Ucabangani ngomphetho omusha we-Samsung Galaxy S6 +?.
Imininingwane engaphezulu - samsung.com
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Unqenqema lwe-Samsung Galalaxy S6 + manje lusemthethweni